မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉)သိန်းလှူဒါန်း | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉)သိန်းလှူဒါန်း
Writen by Tachileik News Agency 6:01:00 PM -0Comments
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်အားပေး ထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်း ပြောကြားလိုက်ပြီး မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉)သိန်းကို ပေးအပ်လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရက မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန၊ ငြိမ်းချမ်ရေးကော်မရှင်နှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီတို့သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃)သိန်းစီ လှူဒါန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်း (H.E. Mr. Sun Guoxiang) သည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-U) ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း၌ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနတွင် တွေ့ဆုံလှူဒါန်းလိုက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အဆင့်ဆင့်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ စွန်းဂေါ်ရှန်းသည် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့အား နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေနှင့်အဖွဲ့အား နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ နိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဓါတ်ပုံ - JCMC ၊ NRPC
မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျအတှကျ တရုတျနိုငျငံက အမရေိကနျဒျေါလာ (၉)သိနျးလှူဒါနျး
တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို ဆကျလကျအားပေး ထောကျခံလကျြရှိကွောငျး မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျရှိနသေော တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာစှနျးဂျေါရှနျး ပွောကွားလိုကျပွီး မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျအတှကျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံအစိုးရက အမရေိကနျဒျေါလာ (၉)သိနျးကို ပေးအပျလှူဒါနျးကွောငျး သိရသညျ။
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံအစိုးရက မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ဆောငျရှကျနသေညျ့အဖှဲ့အစညျးမြား ဖွဈသညျ့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာန၊ ငွိမျးခမျြရေးကျောမရှငျနှငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီတို့သို့ အမရေိကနျဒျေါလာ (၃)သိနျးစီ လှူဒါနျးလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျရှိနသေော တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာစှနျးဂျေါရှနျး (H.E. Mr. Sun Guoxiang) သညျ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ (JMC-U) ဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရာပွညျ့အား ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ (၁၀) ရကျနေ့ မှနျးလှဲပိုငျး၌ ရနျကုနျမွို့ရှိ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာနတှငျ တှဆေုံ့လှူဒါနျးလိုကျပွီး တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) တှငျ လကျမှတျရေးထိုးပွီးသော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အတူ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ အဆငျ့ဆငျ့၏ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှု အခွအေနမြေားအား ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။
တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာ စှနျးဂျေါရှနျးသညျ နပွေညျတျောရှိ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာနတှငျ ငွိမျးခမျြးရေးကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာတငျမြိုးဝငျးနှငျ့ အဖှဲ့အား နိုဝငျဘာလ (၈) ရကျနတှေ့ငျလညျးကောငျး၊ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှနှေငျ့အဖှဲ့အား နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန အစညျးအဝေးခနျးမ၌ နိုဝငျဘာလ(၉)ရကျနတှေ့ငျလညျးကောငျး တှဆေုံ့ခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဓါတျပုံ - JCMC ၊ NRPC